मे महिनामा ओप्पो ए-७६ को विशेष अफर - Naya Pageमे महिनामा ओप्पो ए-७६ को विशेष अफर - Naya Page
१० जेष्ठ २०७९, मंगलवार |
मे महिनामा ओप्पो ए-७६ को विशेष अफर
२३ बैशाख २०७९, शुक्रबार
काठमाडौं । ग्लो डिजाइन, स्टाइलिस र टिकाउ उत्पादन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिंदैं आएको ओप्पोेको ए-सिरीजमा पछिल्लो समय ‘ओप्पोे ए-७६’ नेपाली बजारमा उपलब्ध गराएको थियो ।
ओप्पोे ए-७६ मा ६.५६ इञ्चको पन्च-होल स्क्रिनलाई परिस्कृत गर्दै यसमा अझ प्रतिक्रियात्मक ९० हर्ज रिफ्रेस रेट र १८० हर्ज टच स्याम्प्लिङ रेट डिस्प्लेका साथ उपलब्ध छ । प्रयोगकर्ताहरुलाई उत्पादनमुलक रहन तथा बिना रोकावट मनोरञ्जन प्रदान गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यसमा ३३ वाट सुपरभोक चार्जिङसहितको ५००० एमएएच् क्षमताको ब्याट्री पनि जडान गरिएको छ ।
ओप्पोे ए-७६ मा १.१२ माइक्रो र एफ २.० एपर्चरसहितको ८ एमपी फ्रन्ट क्यामेरा राखिएको छ । यसमार्फत 3264 x 2448 रिजोल्युसनसम्मको पोट्र्रेट सटहरु लिन सकिन्छ । यो फोनमा ए-आई नेचुरल रिटचिङ ब्युटिफिकेशन प्रविधि परिस्कृत गरिएको छ ।
यसले प्रयोगकर्ताको प्राकृतिक अनुहारका बनावटलाई सुरक्षित राख्दै फ्रन्ट क्यामेराका लागि दाग हटाउने सुविधा समावेश गरिएको छ । यसमा भएको ३६० डिग्री फिल लाइटको सहायताले मधुरो वातावरणमा पोट्र्रेट सटहरु अझ उज्यालो र स्पष्ट लिन सकिन्छ र यसमा ब्युटी ईफेक्ट्स फोनको माथिल्लो भागमा सुपरइम्पोज गरिएको छ ।
यस बाहेक, यो स्मार्टफोन ९० हर्ज रिफ्रेस रेट र १८० हर्ज टच स्याम्प्लिङ रेट डिस्प्लेका साथ परिस्कृत गरिएको छ । जसले भिडियो हेर्न र गेम खेल्दा आनन्दको अनुभव दिन्छ । फिंगरप्रिन्ट सेन्सर फोनको छेउमा राखिएको छ । पातलो फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र छेउमा बटनहरु भएकाले फोन हल्का, पातलो र थप सहज अनुभवसहित अझ परिस्कृत पनि देखिन्छ । ओप्पोे ए-७६ नेपाली बजारको मूल्य मात्र रु. २९,९९०/-रहेको छ ।
यस मे महिनामा ओप्पोको विशेष अफरमार्फत ओप्पो ए-७६ किन्दा अन्य यी ३ उत्पादनहरुमा २,००० को छुट प्राप्त गर्न सकिने छ ।
ओप्पो FitBand पहिलेको बजार मूल्य रु. ५,५९९/-
अब मात्र रु. ३,५९९/-
ओप्पो W31 पहिलेको बजार मूल्य रु. ६,९९०/-
अब मात्र रु. ४,९९०/-
ओप्पो W51 पहिलेको बजार मूल्य रु. ८,९९०/-
अब मात्र रु. ६,९९०/-
नीति तथा कार्यक्रम : वित्त र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि हासिल गरिने
लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातको फेरि बढ्यो भाडा, अब कहाँको कति ? (सूची)
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पुनर्विचार हुन्छ : उद्योगमन्त्री बडू
१० महिनामा १४ खर्ब बढीको व्यापार घाटा
जलयात्रा प्रवद्र्धन गर्दै पोखरा पर्यटन परिषद्
नक्कली भ्याट बिल बनाउने विरुद्ध मुद्दा दायर
छात्रामाथि यौन दुर्ब्यवहारको आरोपमा सेन्ट लरेन्सका शिक्षक-सञ्चालक पक्राउ
बलात्कार आरोपी मनोज पाण्डे विरुद्ध मानव बेचविखन र यौन दुर्व्यवहारको दुई मुद्दा चलाइने
जजिराको जहाजमा रगतदेखिएपछि चरासँग ठोक्किएको आशंकामा ‘होल्ड’
भरतपुरको उपमेयरमा चित्रसेन विजयी, मेयरको जित नजिकै रेनु
घरभित्रै युवकको हत्या गरी खोलामा फाल्ने दुई जना पक्राउ
झापामा एमाले अगाडि
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला सरकारले बनाउने
ताप्लेजुङ घटनाको छानबिन हुन्छ : गृहमन्त्री खाँण
काभ्रेमा कांग्रेस पहिलो, माओवादी केन्द्र दोस्रो र एमाले तेस्रो
यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, के-के छन् प्राथमिकतामा ? (पूर्णपाठ)
श्रीलंका र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन
सुदूरपश्चिमको ८७ पालिकाको मत परिणाम : कहाँ कसले जिते ? (सूचीसहित)
भरतपुरमा रेनुको विजय सुनिश्चित, गन्न बाँकी मतभन्दा बढीको मतान्तर
के धरानवासीको ‘हर्ष’ बन्लान् त हर्क ?
काठमाडौंको मेयरमा स्वतन्त्रका बालेन र उपमेयरमा एमालेकी सुनिताको अग्रता कायमै
७२६ पालिकाको मत परिणाम : कांग्रेस ३२०, एमाले १९७ र माओवादी १२० वटामा विजयी